महिलाको शत्रु यौनरोग :: डा. भोला रिजाल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
महिलाको शत्रु यौनरोग
डा. भोला रिजाल शनिबार, चैत ३१, २०६९, १७:५३:००
बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटानजस्ता छिमेकी देशमा देखिने यौनरोग र नेपालमा देखिने यौनरोगको समस्या एउटै छ। नेपालजस्ता अल्पविकशित देशमा कुपोषण तथा वातावरणका कारण यौनरोग धेरै देखिने गर्छन्।
अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा खोलाको फोहोर पानीमा नुहाउने तथा पौडी खेल्ने महिला प्रशस्तै छन्, जसले यौनरोगलाई निम्त्याउँछन्। सानै उमेरमा विवाह र चेताना एवं शिक्षाको कमी पनि यौनरोगको कारण हो। मुख्यतः विदेश गएका युवाबाट गम्भीर प्रकृतिका यौगरोग भित्रिने गरेको पाइन्छ।
विदेश गएका व्यक्ति यौनरोग लिएर आउने र श्रीमतीलाई सार्नेको संख्या धेरै छ। यौनरोगहरू महिलाबाट पुरुषमा भन्दा पनि पुरुषबाट महिलामा सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। योनीबाट निस्कने श्रावको परिमाण बढेमा, गन्हाउने श्राव भएमा, तल्लोपेट दुख्ने र योनीमा डाबर वा घाउ आएमा यौनरोगको शंका गर्न सकिन्छ।
यौनरोगका विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। यसलाई तीन किसिमले हेर्न सकिन्छ। ढुसी संक्रमण, ब्याक्टेरियाबाट हुने संक्रमण र एचआईभी। ढुसी संक्रमण यौनक्रियाका कारण नभई गर्भवती भएका बेला खाने औषधि वा अन्य रोगका कारण देखिने समस्या हो। यसमा योनी चिलाउने, गन्हाउने पानी बग्ने, पिसाव गर्दा पाल्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन्।
केही महिलामा योनी खुम्चने रोग पनि देखिन्छ। यस्ता रोग यौनसम्पर्कका कारण नभई ब्याक्टेरियाका कारण लाग्छन्। यसले गर्भवती महिलाको बच्चा समयभन्दा चाँडो जन्मने हुन्छ। यस्तै, महिलामा देखिने अर्को यौनजन्य समस्या ट्राइकोमोनासिस हो। यसलाई खतरा नमानिए पनि यौनी चिलाएर हैरान पार्छ।
यो यौन सम्पर्कका कारण सर्ने रोग हो। पिसाब गर्दा पोल्ने, योनी धेरै चिलाउने, गन्हाउने पानी बग्ने, योनी र त्यसको वरपर रातो हुने यसका लक्ष्यण हुन्। एचआईभी, धातुरोग र भिरिङ्गी गम्भीर खालका यौनरोग हुन्। धातुरोग र भिरिङ्गीको समयमै उपचार नगरे यसले बाँझोपना निम्त्याउन सक्छ।
यसमा संक्रमित व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क राखेको दुई देखि सात दिनभित्र लक्ष्यण देखिन थाल्छ। योनी चिलाउने, गन्हाउने पानी बग्ने, पिसाब गर्दा पोल्ने, तल्लो पेट दुख्ने, कसैकसैलाई ज्वरो आउने, यौन सम्पर्क राख्दा पोल्ने वा रगत आउनेजस्ता लक्ष्यण देखिन्छन् भने केहीलाई त कुनै लक्ष्यण नै देखिँदैन।
यौनी चिलाउने धेरै कारण हुन सक्छ। कसैलाई लुतो वा जुम्राको कारण योनी चिलाउँछ भने कसैलाई साबुन वा स्याम्पूको एलर्जीले पनि यौनी चिलाउँछ। कसैलाई जटिल संक्रमणका कारण पनि यौनी चिलाउने हँुदा समयमै उपचारतर्फ लाग्नुपर्छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको कमी भएकाले जाँच गराउने आउनेमध्ये ५० प्रतिशतमा यौनरोगको संक्रमण भेटिन्छ। यी रोगीहरूमा पछि गएर निसन्तान हुने, क्यान्सर हुने र लगातार रक्तश्राव हुने गम्भीर समस्या देखिन्छ। त्यसैको समाधान भनेकै नियमित रूपमा योनी परीक्षण गराउनु हो।
महिला वा पुरुष दुवैलाई यौनरोगबाट बचाउन सर्वप्रथम जनचेतना आवश्यक छ। नेपाली समाजमा रहेको रुढीवादी सोच र परम्परा त्याग्न जरुरी छ। एउटै कपडा नछुने भएका बेला पाँचदेखि सात दिनसम्म प्रयोग गर्ने, राम्ररी नसुकेको पेन्टी वा भित्री कपडा प्रयोग गर्नाले ब्याक्टेरियाले योनीमा आक्रमण गर्छ। जसका कारण संक्रमण भई विभिन्न यौनरोग उत्पन्न हुन्छ।
यौनरोगको विषयमा छोरीलाई शिक्षा कसरी दिने भन्ने कुरामा बाबुअमाले सोच्नुपर्छ। सानैदेखि यस विषयमा जानकारी गराए यौनरोग लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ। अर्को कुरा विदेशबाट यौनरोग लिएर आएकालाई कसरी जोगाउने, कसरी उनीहरूको जाँच गर्ने, कसरी कन्डमको प्रयोग बढाउने भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। एचआईभीजस्तो डरलाग्दो यौनरोगबाहेक सबै प्रकारका यौनरोगको उपचार सम्भव छ।
सम्भव छ भन्दैमा लापरबाही गर्नु भने हँुदैन। सबैभन्दा ठूलो कुरा डर हो। नेपाली समाजमा स्वास्थ्यमा सामान्य गडबडी आए पनि ठूलो रोग हो कि भनेर चिन्ता लिने प्रवृत्ति छ। यही डरका कारण रोग बढ्दै जाने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ गम्भीर समस्या नआएसम्म उपचार गराउन नै नजाने मानसिकताले पनि हाबी छ। यौनरोग लाग्नेबित्तिकै क्यान्सर भयो भन्ने डर धेरैले पाल्छन्। यौनरोग लाग्दैमा क्यान्सर हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर रोग लुकाएर ढिला उपचार गर्दा जटिलता थपिन्छ। तसर्थ रोगका कुनै लक्ष्यण देखिए पनि लुकाएर बस्ने वा डराएर आत्तिने गर्नु हुँदैन, तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिएर उपचार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ।